नेपाल आईडल उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धाी मेनुका पौडेल सफल स्थापित नव गायिकामा स्थापित हुदै
तिनजुरे अनलाइन,काठमाडौँ /
श्याम नेपाली हिमाल,
साच्चिकै पनि संसारमा अनोखा प्रतिभाहरु भऐका मान्छेहरु को जन्म यो संसारमा हुन्छ यस्तै एक महान प्रतिभा सुमधुर आवाजकी धनी हुन नेपाल अाईडलको उत्कृष्ट १० भित्रीका नव गायक मेनुका पौडेल जो अरु मान्छे भन्दा फरक हुनु हुन्छ । वहाँ यो संसारका सृजना लाई देख्न सक्नु हुन्न यो संसारको अनुभुति खुल्ला आँखाले गर्नु सक्नु हुन्न वहाँ दृष्टिबिहीन हुनु हुन्छ ? दृष्टिबिहीनमा एक प्रकारको शक्ति हुन्छ, आँखा देखिँदैन त्यसैले पनि कान र मन मस्तिष्क हरेक समयमा सजग र होसियार रहन्छ’ दृष्टिबिहीनसँग एकप्रकार अदभूत , अदृश्य शक्ति हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा गायिका मेनुका पौडेलको जवाफ ।
आँखा नदेख्ने भएपछि कुनै कुरा जान्न परे वा त्यसलाई मनन गर्नुपरे त्यसप्रति नै लगाव हुन्छ । मन मस्तिष्क एकोहोरो हुन्छ र त केही कुरालाई आँखाले हेर्न नसकेपनि मनले छर्लंगै पारिदिन्छ । जिन्दगी अहिले निरन्तर सागर संगको भेटको लागि अविरल बग्दै गरेको नदी झैँ सामान्य हुन सकेको छैन । किनकी खहरे खोलाहरु अझै मिसिंदैछन् । तर निष्ठुरी बनेर जिन्दगीलाई निखार्ने काम भने रोकिएको छैन । सिँढी चढ्दै गर्दा एउटा बिन्दुमा पुगिएको छ । यो विन्दुलाई अझै माथि माथि पुर्‍याउनु छ, किनकी दृष्टिबिहीन सबैका लागि खम्बा बन्नु छ । आज तेहि निरन्तरताको संघर्षले गर्दा गित र संगितलाई माया गर्ने स्रोताको मनको ढुकढुकी बनेकी छिन मेनुका पौडेल सरल , इमानदार ,अनुशासित आचरण भऐकी गायिक मेनुका पौडेल अब नेपालको संगितिक आकाशको धोरोहर हुनेमा कुनै दुईमत छैन भन्छन वहाँको गित सुनेका स्रोतहरु वहाँका सार्वजनिक भऐका गित प्रतिको प्रतिक्रियाले स्पष्ट देखाऐको छ नेपाल आईडल को उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धाहरु विच प्रतिस्पर्धा हुदै गर्दा हाम्रो प्रतिनिधिले ले गरेको प्रश्न नेपाल आईडल विवादित छ नि ? भेदभाव पनि छ भन्छन नि कस्तो लाग्छ ? मईले महसुस गरेको छैन तर सुनेको छु सत्य जस्तो लाग्दैन ।
त्यसै पनि अरु भन्दा म फरक छु अरुको जस्तो सरल छैन जिन्दगी ।मलाई यो जुन ठाउँमा ल्याउन नेपाल आईडलको ठुलो हात छ धन्यवाद दिन्छु म सम्पूर्ण टिमलाई मलाई त्यो लाग्दैन मेरो जिन्दगी नै एउटा संर्घष हो यदि म भित्र नेपाली स्रोतको मन जित्ने आवाज छ भने माया पाउने छु। माया दिनु हुने छ वास्तविक सत्य आज सम्म धेरै गितहरु रेकर्डिङ भऐका छन। वहाँको जिन्दगीको यात्रा निकै संघर्ष पूर्ण छ अरुको जस्तो सरल सहज पक्कै थिऐन जन्मँदै आँखाको दृष्टि गुमेपछि आमाको न्यानो काख र बाबुको साथ छोडेर अन्जान मानिसको भीडमा मेनुका पुग्नु भयो । सबै अंजान मानिस । फेरि उति बुझ्ने पनि होइन, मात्र ४ वर्षको उमेर । तैपनि यति सानो उमेरमा नचिनेकालाई चिन्ने प्रयास मात्रै भएन उनीहरुकै मनमा बस्न सफल हुनुभयो ।आज सम्पुर्ण नेपालीको मनमा बस्न सफल हुनु भऐको छ । त्यो समय र आज निकै फरक छ कुनै समयमा बाल्यकालमा माथिल्लो उमेरका दाई दिदीको माया पाउने सफल मेनुका अहिले नेपालको पहिलो नेपाल आईडलको उत्कृष्ट १० प्रतिस्पर्धा बनेर धेरै नेपालीको मन भित्र बस्न सफल मेनुकाले देश, विदेशको यात्रा पनि गर्न सफल हुनु भऐको छ ।
वहाँ का कयौं नयाँ रेकर्डिङ गितले नेपाली संगितिक आकाशमा फराकिलो स्थानमा पुगिसकेका छन । तपाईं यो स्थानमा कसरी आई पुग्नु भयो ? ‘सँघर्ष नहुँदो हो त म यहाँसम्म कहाँ आइपुग्नु’ मेनुकाले भन्नुभयो । होस्टेलमा आफू भन्दा ठूलाले हार्मोनियम समाएको, गीत गाएको र मादल, तबला बजाएको सुन्दा मेनुकाको मन त्यतै हौसियो आउने गर्थियो । मेनुकाको बाल्यकाल बाट देखि सुरु भयो सांगीतिक यात्रा । सुरुका दिन कष्ठकर नै थिए । साना हातले हार्मोनियम समाउनै सक्दैन थियो । सकोस् पनि कसरी आमाको हात समाएर हिँड्नुपर्ने बेला तर वहाँ निराश कहिले हुनु भऐन ? संगीतप्रतिको लगाव देखेर अन्तत गुरु र दाई दिदीले नै हार्मोनियम समाएर बजाउन सिकाउनुभयो । वहाँ को भनाई थियो त्यतिबेलाका सँगैका दाईदिदी र गुरुलाई सम्झँदै मेनुका कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भावुक बन्नुहुन्छ, ‘मलाई त्यसरी उहाँहरुले नसिकाउनु भएको भए, म कहाँ हुन्थें होला ? जस जसले मलाई सिकाउनुभयो सबैप्रति आभारी, थप अझ नेपाल आईडलले एउटा परिचय दिऐको छ यो मेरो मात्रै होइन सबैको सफलता हो ।’ दुई बहिनी आमा बाबासँगै बस्छन् ।
आमाको हातले पकाएको खान पाएका छन्, न्यानो काख पाएका छन् । तर पनि रत्तिभर पीर छैन आफूले त्यो नपाएकोमा । सानैमा आमाको काखमा लुट्पुटिएर मात्रै बसेको भए यो रंगिन दुनियाँ कसरी महशुस गर्न पाउनु ? ‘म जे छु त्यसमा नै खुशी र सन्तुष्टि छु । आमाबाबाले होस्टेल नराख्नु भएको भए मैले यो प्लाटफर्म पाउने थिईन । होस्टल दृष्टिबिहीनहरुकै लागि भएकाले मैले त्यहाँ धेरै माया र स्नेहसँगै सिक्ने मौका पाए । एउटा डोर्याउने र टेक्ने बलियो लट्ठी पाएँ । त्यसकै सहाराले यति अग्ला सिँढी चढ्न सफल भएँ ।’ नेपाल आईडल कि राष्ट्र स्तरीय नव गायन प्रतिस्पर्धा उत्कृष्ट १० मेनुकोको जन्म घर झापा हो । झापाको दुर्गा उच्च मावि विद्यालय, जहाँ बाल्यकाल बितेको थियो, त्यहीँ संगीतका धेरैजसो आयाम सिक्ने अवसर मिलेको थियो उहाँको आवाज भने पाको, निखारिएको सशक्त र बुलन्द छ ।